IY2 YOKUFUNDA IIMOTORS - izinciphisi, izixhobo zokunciphisa iintshulube, iibhokisi zebhokisi, iiplanethi zebhokisi, izinciphisi zesantya, umahluko, iihelical gear, ii-gear zentsimbi, iibhokisi zebhokisi yezolimo, iitrektara, iigi zelori
Y2 YOKUFUNDA IIMOTO
Ikhaya / imoto / Y2 YOKUFUNDA IIMOTO
Y2 INTSHAYELELO NGOKUBANZI
I-Y2 uthotho lwezigaba ezintathu ze-asynchronous motors, eziphuhliswe ngeendlela ezintsha, ziyahlaziywa kunye nokuphuculwa kwemveliso esekwe kwiimoto ze-Y zothotho.
Iimoto zothotho ze-Y2 zikwimo etywiniweyo iyonke kunye nohlobo olupholileyo fan, uhlobo lwe-squirrel cage kunye nenoveli kuyilo kunye nembonakalo entle, ubumbano lwesakhiwo, ingxolo esezantsi, ukusebenza ngokukuko, itorque enkulu, ukusebenza ngokugqwesileyo, ulondolozo olulula, njl. yamkele ubambiso lodidi lwe-F kwaye iyilwe njengenkqubo yokuvavanya inkqubo yokugquma ngokungqinelana nokusebenza kwamazwe aphesheya.
Iimoto zohlobo lwe-Y2 zinokusetyenziswa ngokubanzi kwizinto ezahlukeneyo zokuqhuba ezinje ngezixhobo zomatshini, ii-blowers, iimpompo, iibhokisi zegiya, iicompressors, abathuthi, oomatshini bezolimo njalo njalo.
Lobushushu Ambient: 15 ℃ -40 ℃ .Altitude: akukho ngaphezulu kweemitha ezili-1000 ukusuka kwinqanaba itywina.
Umbane ulinganisiwe: 380V. Ukulinganiswa kwamaxesha: 50HZ,
Uqhagamshelo: Y uqhagamshelo lwamkelwe iimoto ezingezantsi kwe3KW (3KW ifakiwe) kwaye △ uqhagamshelo lwamkelwa kwabanye ngaphezulu kwe4KW (ibandakanyiwe i4KW) Isabelo sokusebenza: inkqubo yokusebenza eqhubekayo (S1).
Ukufakwa kwe-F yeklasi, ubushushu obonyukayo be-stator ejijwayo evavanywe kwi-80K (ngendlela yokumelana).
Inqanaba lokhuselo: kumzimba ophambili yi-IP54, kwibhokisi yesiphelo inokufikelela kwi-IP55. Indlela yokupholisa: IC411.
Amalungiselelo okonyuka kweemoto ahambelana nengcebiso ye-IEC34-7. Kukho amalungiselelo amane asisiseko aboniswe njengetafile kunye namanani alandelayo.